ငါ..ဘွဲ့မရခဲ့လို့ ဆိုပြီး စိတ်အားငယ်စရာ မလိုပါဘူး(ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ယူဖြစ်အောင်ယူသွားပါ) – Tameelay
တောရွာလေး တစ်ရွာကနေအလွန်ရိုးသားတဲ့ လူငယ်လေးဟာ အလုပ်ရှာဖို့မြို့ကို တက်လာခဲ့တယ် ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ကုမဏီ တစ်ခုရှေ့မှာ လူစုလူဝေးကြီးရှိနေတာကြောင့် မေးမိလိုက်တယ်
အကိုတို့ ဒါဘာလုပ်နေတာလဲဗျ ?
“အေးးးညီ အလုပ်ရှောက်နေကြတာကွ ”
“ဟာဟုတ်လားးး ညီလဲအလုပ်ရှာဖို့ တောကတက်လာတာ အကိုရ”
”ဒီက လစာကောင်းတယ် ညီရ”
ဒီလိုနဲ့ အလုပ်ဝင်ရှောက် ဖိုင်တွေဘာတွေဖြည့်ခဏနေတော့ လာခေါ်တယ် သူဌေးကိုယ်တိုင် အင်တာဗျူးတာလေ
“အရင်က ဘယ်မှာလုပ်ဖူးလဲ ”
“အော် ဒီမှာ အတန်းပညာကို ဖြည့်ထားတာ နှစ်တန်း’အောင်ဆိုတာ တကယ်လား ”
“ဟုတ်မိဘတွေကဆင်းရဲလို့ ကျောင်းကိုနှစ်တန်းပဲနေဖူးပါတယ် ”။
သူဌေး က အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့
” အေး အေးးပြန်တော့ ပြန်တော့
ဆိုပြီး လူငယ်လေးအား ပြန်လွတ်လိုက်တယ်လူငယ်လေးလဲစိတ်ညစ်သွားတာပေါ့ ဒီလိုနဲ့ပြန်ထွက်လာ ခဲ့တယ်
မနီးမဝေးကြတော့ ထပ်တွေ့တယ် အဲ့လိုပဲ လူတွေရပ်ပြီးအလုပ်ရှောက်နေကြတဲ့သူတွေ။
အဲ့လိုပဲ ဖောင်ဖြည့် အင်တာဗျူးး သူဌေးကမေးတယ်
“အတန်းပညာ က ဘယ်လောက်လဲ? “ဟုတ် နှစ်တန်းပဲတက်ဖူးပါတယ်”
ပျော်ရွင်နေတာပေါ့ အလုပ်ရတော့ လူငယ်လေးပြန်သွားတော့ အတွင်းရေးမှူးးကမေးတယ်
ဆရာ ဘာလို့ပညာမတက်တဲ့လူ ကို အလုပ်ခန့်လိုက်တာလဲတဲ့ အေးးအေးး သူက ပညာမတက်ဘူးဟုတ်တယ် ငါ့ကို မလိမ်ဘူးကွ
ရိုးသားတယ်ဖြောင့်မက်တယ် ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိတယ် အလုပ်ရပြီဆိုတော့ သူမျက်နှာမင်းမြင်လိုက်လားး ။
ထီ ပေါက်သလိုပျှော်သွားတာ”အေးးတစ်ခါတစ်လေ ပညာတက်ပြီးမဖြောင့်မက် မတည်ကြည်ရင်ပညာတက်ပြီး အလကားပဲကွ”။
ဒီလိုနဲ့ လူငယ်လေးအလုပ်ရ ကြိုးစားတော့ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ရာထူးတိုး နောက်ဆုံး အတွင်းရေးမှူးရာထူးရသွားတယ် သူဌေးရဲ့အနားမှာ ပဲနေပြီးအလုပ်ကိုကြိုးစားခဲ့တယ်။
တစ်နေ့ အလုပ်ရှင် အစည်းဝေးပွဲကြီးတစ်ပွဲ ဖိတ်လာတယ်သူဌေးလဲ လူငယ်လေးကိုပါ ခေါ်ခဲ့တယ်
ပြီးတော့စကားတွေဘာတွေပြောကြရင်းညစာစားကြတယ်ဒီလိုနဲ့ မဟူရာ ကုမဏီသူဌေးက လူငယ်လေးကိုမှတ်မိသွားတယ်
”ဟ မင်းကတော်လှချည်လားကွ ငါ့မှာတော့ကွာ ရိုးသားမယ့်လူ ငါ့အပေါ်သစ္စာရှိမယ့် လူ ခုထိမရှာနိုင်သေးဘူးကွာ”တဲ့။
“မိတ်ဆွေ ခများက သူ့အတန်းပညာကိုပဲ ကြည့်ခဲ့တာကိုးရိုးသားတဲ့စိတ်ကိုမှ ခင်များမကြည့်ခဲ့တာကိုးးးသူကလိမ်မယ်ဆို လိမ်လို့ရသားပဲ
ဒါပေမယ့် အမှန်တိုင်းနှစ်တန်းပဲ တက်ဖူးတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်လေ ”။
တစ်ခါတစ်လေ ပညာတက်ပေမယ့် မရိုးသားရင်ပညာတက်ပြီးအလကားပဲ အပေါ်ယံကြည့်ရုံနဲ့
လူတစ်ယောက်ရဲ့အရည်အချင်းကို မသိနိုင်ဘူးးး ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိရင်ပညာမတက်လဲ ထက်မြတ်တယ်
အော် စာလေးဆုံးတော့ ကိုယ့်ဘဝတောင်ကိုယ်သတိရသွားတယ်
Credit မူရင်း
ငါ..ဘှဲ့မရခဲ့လို့ ဆိုပွီး စိတျအားငယျစရာ မလိုပါဘူး(ကွညျ့ဖွဈအောငျ ကွညျ့ယူဖွဈအောငျယူသှားပါ)
တောရှာလေး တဈရှာကနအေလှနျရိုးသားတဲ့ လူငယျလေးဟာ အလုပျရှာဖို့မွို့ကို တကျလာခဲ့တယျ ရှာရငျးရှာရငျးနဲ့ကုမဏီ တဈခုရှမှေ့ာ လူစုလူဝေးကွီးရှိနတောကွောငျ့ မေးမိလိုကျတယျ
အကိုတို့ ဒါဘာလုပျနတောလဲဗြ ?
“အေးးးညီ အလုပျရှောကျနကွေတာကှ ”
“ဟာဟုတျလားးး ညီလဲအလုပျရှာဖို့ တောကတကျလာတာ အကိုရ”
”ဒီက လစာကောငျးတယျ ညီရ”
ဒီလိုနဲ့ အလုပျဝငျရှောကျ ဖိုငျတှဘောတှဖွေညျ့ခဏနတေော့ လာချေါတယျ သူဌေးကိုယျတိုငျ အငျတာဗြူးတာလေ
“အရငျက ဘယျမှာလုပျဖူးလဲ ”
“အျော ဒီမှာ အတနျးပညာကို ဖွညျ့ထားတာ နှဈတနျး’အောငျဆိုတာ တကယျလား ”
“ဟုတျမိဘတှကေဆငျးရဲလို့ ကြောငျးကိုနှဈတနျးပဲနဖေူးပါတယျ ”။
သူဌေး က အထငျသေးတဲ့မကျြလုံးနဲ့
” အေး အေးးပွနျတော့ ပွနျတော့
ဆိုပွီး လူငယျလေးအား ပွနျလှတျလိုကျတယျလူငယျလေးလဲစိတျညဈသှားတာပေါ့ ဒီလိုနဲ့ပွနျထှကျလာ ခဲ့တယျ
မနီးမဝေးကွတော့ ထပျတှတေ့ယျ အဲ့လိုပဲ လူတှရေပျပွီးအလုပျရှောကျနကွေတဲ့သူတှေ။
အဲ့လိုပဲ ဖောငျဖွညျ့ အငျတာဗြူးး သူဌေးကမေးတယျ
“အတနျးပညာ က ဘယျလောကျလဲ? “ဟုတျ နှဈတနျးပဲတကျဖူးပါတယျ”
ပြျောရှငျနတောပေါ့ အလုပျရတော့ လူငယျလေးပွနျသှားတော့ အတှငျးရေးမှူးးကမေးတယျ
ဆရာ ဘာလို့ပညာမတကျတဲ့လူ ကို အလုပျခနျ့လိုကျတာလဲတဲ့ အေးးအေးး သူက ပညာမတကျဘူးဟုတျတယျ ငါ့ကို မလိမျဘူးကှ
ရိုးသားတယျဖွောငျ့မကျတယျ ကွိုးစားခငျြစိတျရှိတယျ အလုပျရပွီဆိုတော့ သူမကျြနှာမငျးမွငျလိုကျလားး ။
ထီ ပေါကျသလိုပြှျောသှားတာ”အေးးတဈခါတဈလေ ပညာတကျပွီးမဖွောငျ့မကျ မတညျကွညျရငျပညာတကျပွီး အလကားပဲကှ”။
ဒီလိုနဲ့ လူငယျလေးအလုပျရ ကွိုးစားတော့ တဈနှဈပွီးတဈနှဈ ရာထူးတိုး နောကျဆုံး အတှငျးရေးမှူးရာထူးရသှားတယျ သူဌေးရဲ့အနားမှာ ပဲနပွေီးအလုပျကိုကွိုးစားခဲ့တယျ။
တဈနေ့ အလုပျရှငျ အစညျးဝေးပှဲကွီးတဈပှဲ ဖိတျလာတယျသူဌေးလဲ လူငယျလေးကိုပါ ချေါခဲ့တယျ
ပွီးတော့စကားတှဘောတှပွေောကွရငျးညစာစားကွတယျဒီလိုနဲ့ မဟူရာ ကုမဏီသူဌေးက လူငယျလေးကိုမှတျမိသှားတယျ
”ဟ မငျးကတျောလှခညျြလားကှ ငါ့မှာတော့ကှာ ရိုးသားမယျ့လူ ငါ့အပျေါသစ်စာရှိမယျ့ လူ ခုထိမရှာနိုငျသေးဘူးကှာ”တဲ့။
“မိတျဆှေ ခမြားက သူ့အတနျးပညာကိုပဲ ကွညျ့ခဲ့တာကိုးရိုးသားတဲ့စိတျကိုမှ ခငျမြားမကွညျ့ခဲ့တာကိုးးးသူကလိမျမယျဆို လိမျလို့ရသားပဲ
ဒါပမေယျ့ အမှနျတိုငျးနှဈတနျးပဲ တကျဖူးတယျလို့ ပွောခဲ့တယျလေ ”။
တဈခါတဈလေ ပညာတကျပမေယျ့ မရိုးသားရငျပညာတကျပွီးအလကားပဲ အပျေါယံကွညျ့ရုံနဲ့
လူတဈယောကျရဲ့အရညျအခငျြးကို မသိနိုငျဘူးးး ကွိုးစားခငျြစိတျရှိရငျပညာမတကျလဲ ထကျမွတျတယျ
အျော စာလေးဆုံးတော့ ကိုယျ့ဘဝတောငျကိုယျသတိရသှားတယျ
Credit မူရငျး
“သင် မျက်မှန်တပ်သင့်နေပြီဆိုတဲ့ အချက် (၃) ချက်”
၁- စာဖတ်ရင် ကြည့်နေကြ အလင်းရောင်ကို အားမရတာမျိုး ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင် အမြင်အာရုံ ချို့ယွင်းနေပါပြီ။ မီးအလင်းရောင်ကို စစ်ဆေးကြည့်လို့ ပုံမှန်အတိုင်း ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ မျက်မှန်တပ်ဖို့ လိုပါပြီ။ ၂- ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေတာကလည်း မျက်စိနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ ပြပြီး မျက်မှန်တပ်သင့်ရင် တပ်ရပါမယ်။ ၃- …
ဘ၀မှာ အမှားကင်းစွာနေဖူးတဲ့သူ ဘယ်လောက်များများရှိနိုင်မှာလဲ သူတစ်ပါးထိခိုက်အောင် မထိခိုက်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ မှားယွင်းဖူးတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ အမှားမလုပ်ခဲ့ဖူးသူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ သိစိတ်က မှားယွင်းခဲ့မှု့ မသိစိတ်က မှားယွင်းခဲ့မှု့ လူသိအောင်မှားယွင်းခဲ့မှု့၊ လူမသိအောင်မှားယွင်းခဲ့မှု့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲ မှားယွင်းခဲ့ပါစေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားကတော့ မိမိစိတ်နဲ့ အတူလိုက်ပါနေစမြဲပါ။ ပုထုဇဉ်လူသားဖြစ်နေရပြီမို့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်ကြိုးစားရင်း ဘ၀မှာ သူတစ်ပါးအပေါ်စိတ်မသန့်ရှင်းပဲ …